गरिबलाइ एक रुपैया नछाड्ने ओली सरकार एनसेलले अर्बौ ठग्दा किन बोल्दैनन् ? – All top Here
Home/समाचार/गरिबलाइ एक रुपैया नछाड्ने ओली सरकार एनसेलले अर्बौ ठग्दा किन बोल्दैनन् ?
गरिबलाइ एक रुपैया नछाड्ने ओली सरकार एनसेलले अर्बौ ठग्दा किन बोल्दैनन् ?
काठमाडौं । नायिका रेखा थापाले गरिबलाइ एक रुपैया नछाड्ने सरकार एनसेलले अर्बौ ठग्दा कार्वाही नभएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेकी छिन् । एनसेल आफुले प्रयोग गर्न छाडिसकेको बताउदै तीन करोड नेपाली जनतालाई एनसेल बहिष्कार गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।
एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनिन्, ‘एनसेलले राज्यलाई अरबौं ठगेको छ , तीन करोड नेपालीले यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’ उनले एनसेल मात्र नभई राज्यलाई ठग्नेहरुविरुद्ध आफू सधै सडकमा आउन तयार रहेको समेत बताइन् ।
एनसेल प्रकरणमा राज्य दोषी भएकोसमेत उनको भनाई थियो । ‘गरिब नेपाली जनताले कर तिर्नुपर्ने तर एनसेलले तिर्नुनपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् । उनले साँच्चै देशलाई माया गर्नेहरुले एनसेलको प्रयोग गर्न नहुनेसमेत बताइन् ।
एनसेलले आर्जन गरेको पैसा विदेशमा पसिना बगाउनेले हेलो भनेको पैसा हो भन्दै किसान र मजदूरको रगत र पसिना चुसे बराबर भएको बताइन् ।
कोरोनाको महामारी संगै चितवन बाट। आयो दुखद खबर
१८ घन्टा देखि यात्रु जीपमा चेपिए,